सिरि ए को परिचय परिवर्तन गरिदिनेछ रोनाल्डोको युभेन्ट्स मुभ : मौरिन्हो – Khel Dainik
सिरि ए को परिचय परिवर्तन गरिदिनेछ रोनाल्डोको युभेन्ट्स मुभ : मौरिन्हो
एजेन्सी । म्यानचेष्टर युनाइटेडका वर्तमान प्रशिक्षक जोसे मौरिन्होका अनुसार पोर्चुगिज स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो युभेन्ट्समा आवद्ध भएपछि सिरि ए को सबै पक्षमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन् । गत साता १०५ मिलियन युरोमा रियल मेड्रिड छाड्दै रोनाल्डो युभेन्ट्समा आवद्ध भएका थिए ।
इटालियन च्याम्पियनले सोमबार रोनाल्डोको मेडिकल पूरा गरेपछि सार्वजनिक रुपमा अनावरण गरेको थियो । मौरिन्होले युभेन्ट्सलाई यो स्थानान्तरणका लागि बधाई पनि दिएका छन् । साथै उनले यो अनुबन्धले सिरि ए मा निकै सकारात्मक असर पर्ने कुरामा जोड समेत दिएका छन् ।
रोनाल्डोको इटाली स्थानान्तरणले सिरि ए हेर्नेहरुको संख्या बढ्ने निश्चित छ । स्पेनीस अखबार एएसका अनुसार रोनाल्डो तुरीनमा आएको २४ घण्टामा उनको नामको जर्सी ५ लाख २० हजार प्रति बिक्री भएको थियो ।
Jose Mourinho believes Juventus deal for Cristiano Ronaldo will provide massive boost for all of Italian football https://t.co/Os8vKZC9bW
टेले रेडियो स्टीरियोसँग कुरा गर्दै मौरिन्होले भनेका छन्, “अब हामी तीन प्रकारको फुटबल हेर्नेछौं । सबै मानिसहरु रोनाल्डोका लागि इटाली हेर्नेछन्, लियोनल मेसीका लागि स्पेन र प्रिमियर लिगका लागि इङल्याण्डलाई हेर्नेछन् । अहिले सिरि ए विश्वकपको सबैभन्दा महत्वपूर्ण च्याम्पियनसिप बनेको छ । फुटबलमा सबै परिवर्तन हुन सक्छ ।
अब इन्टर मिलान, एसी मिलान र रोमाको पनि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । रोनाल्डोसँगै अब युभेन्ट्स पनि निकै बलियो भएको छ । उनीहरु यो अनुबन्धले निकै प्रेरित छन् । उनीहरु सिरि ए को क्षमता, ध्यान र उत्सुकता बृद्धि गर्नमा योगदान दिईरहेका छन् । म युभेन्ट्सलाई बधाई दिन चाहन्छु । मार्केटिङ्ग, विज्ञापन र व्यापारका लागि यो आँधी हो, यसले सिरि ए को सबैतर्फ प्रभाव पार्नेछ ।”
← मार्सेलोका कारण रियलमा आउन सकेनन् नेमार ! मेसीको छाँयाबाट निस्केर अब एम्बाप्पेको छाँयामा घुमीरहेका छन् नेमार ! →